အခါလွန်မိုးရွာသွန်းနေမှုကြောင့် ပဲစင်းငုံတောင်သူများ အခက်အခဲကြုံနေ အထွက်နှုန်းကျမည်ကို စု?? - Yangon Media Group
အခါလွန်မိုးရွာသွန်းနေမှုကြောင့် ပဲစင်းငုံတောင်သူများ အခက်အခဲကြုံနေ အထွက်နှုန်းကျမည်ကို စု??
ငါ့သရောက်၊ ဇန်နဝါရီ ၃- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးမြို့နယ် ငါ့သရောက်မြို့၌စိုက်ပျိုးထားသည့် ပဲစင်းငုံသီးနှံစိုက်ခင်းများ နုတ်သိမ်းချိန်တွင် အခါလွန်မိုးများရွာသွန်းနေမှုကြောင့် ပဲစင်းငုံတောင်သူများအခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ပဲစင်းငုံသီးနှံ စိုက်တောင်သူများထံမှ သိရသည်။
”မိုးဦးမိုးနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပဲ စင်းငုံသီးနှံစိုက်ခင်းတွေ သိမ်း ဆည်းနေတဲ့အချိန်မှာ အခါလွန်မိုးရွာသွန်းနေတဲ့အတွက် အခက် အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင် ပဲစင်းငုံသီးနှံအစေ့ထုတ်ဖို့ လုပ် ကိုင်မရ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ပဲစင်းငုံသီးနှံဟာ နေ ပူလှန်း အခြောက်ခံပြီးပုတ်ယူရတဲ့ သီးနှံဖြစ်တာကြောင့် ယခုလို မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းနေရင် တောင်သူတွေ ဘာမှလုပ်လို့ မရပါဘူး။ ပဲစင်းငုံသီး နှံစိုက်ခင်းတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုလည်း တောင်သူတွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်”ဟု ငါ့သရောက်မြို့ ဗြူ ကြီးကျေးရွာမှ ပဲစင်းငုံစိုက်ပျိုးတောင်သူများထံမှ သိရသည်။
အခါလွန်မိုးသည် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှစတင်၍ ယနေ့အချိန်ထိ ရွာသွန်းနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပဲစင်းငုံဈေးနှုန်းမှာ တစ်တင်းလျှင် ငွေကျပ်တစ်သောင်းကျော်ခန့်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သောကြောင့် ပဲစင်းငုံစိုက်တောင်သူများ ယခုနှစ် တွင် အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
”တောင်သူတွေ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ ပဲစင်းငုံသီးနှံအထွက်နှုန်းကတော့ ခုမှတောင်သူတွေ သိမ်းဆည်း နေတာဖြစ်လို့ တစ်ဧကဘယ်လောက်ထွက်မယ်ဆိုတာ မသိရ သေးပါဘူး။ ပဲစင်းငုံသီးနှံစိုက်ခင်းတွေ သိမ်းဆည်းတဲ့အချိန်မှာ မိုးရွာသွန်းတဲ့အတွက် ဒီနှစ်ပဲစင်းငုံသီးနှံစိုက်ပျိုး တောင်သူတွေ အထွက်နှုန်းလျော့နည်းမယ်ထင်ပါတယ်”ဟု ငါ့သရောက်မြို့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန (ဦးစီးအရာရှိ) ဦးဝင်းကိုကပြောသည်။
ညောင်ဦးမြို့နယ် ငါ့သရောက်မြို့တွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ် ငန်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သည့်ကျေးရွာ ၃၂ ရွာခန့်ရှိပြီး ပဲစင်း ငုံသီးနှံအား စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကာ ယခုနှစ်တွင် ငါ့ သရောက်တစ်မြို့နယ်လုံး ပဲစင်းငုံသီးနှံစိုက်ဧက ၃၈၃၅ ဧက စိုက်ပျိုးထားကြောင်း ငါ့သရောက်မြို့ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲ ရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနရုံး၏ စာရင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
''တိုက်ခိုက်မှုတွေကို စိတ်ထဲမှာမထားဘူး။ ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်သွားမယ်ဆ?